ROTTWEILER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Rottweiler Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Royce (bidix) eeyaha loo yaqaan 'Rottie' eey yar oo 5 bilood jir ah oo ay weheliso Barracuda aka 'Cuda (midig) qaangaarka Rottie ee 3 1/2 sano jir ah— '' Cuda waa Rottie aad u dheer culeyskiisuna yahay 139 rodol. Royce wuxuu culeyskiisu ahaa 115 rodol markii uu jiray 11 bilood wuxuuna ka dheer yahay walaalkiis! Waxaan jeclaan lahaa in Royce dib loo dhigo oo ay u dhaqanto sidii Cuda oo kale, oo maalin walba ninkeyga ula shaqeysa. Xadhig looma baahna waana mid saaxiibtinimo badan oo bulsho leh. Royce, dhanka kale, waa kubad tamar ah. Gabi ahaanba duurjoogta, laakiin saaxiibtinimo. Isagu ma fadhiisan karo oo wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro 'Cuda, kaasoo si ikhtiyaari ah ula macaamili doona ilaa uu Royce ka gudbo qadka oo uu dhegaha ka taabto. Marna dagaal dhexdooda ah, laakiin Royce wuu ogyahay goorta uu ka laabanayo. Kaliya waxaan rajeynayaa waqti iyo dulqaad inuu dejiyo. Labadaba waan jeclahay mana yeelan doono waligey nooc kale! '
Rottweil Metzgerhund - Kawaanleyda Dog
Rottweiler-ku wuxuu leeyahay muruq, baaxad weyn, jir awood badan. Madaxa waa ballaadhan yahay wejiga duuban. Afka si wanaagsan ayaa loo horumariyay. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Sanka ballaaran waa madow. Bushimahu way madow yihiin, afkuna gudaha buu ku madoobaa. Indhaha dhexdhexaadku waa mugdi iyo qaab yicib ah. Rottweilers qaarkood ayaa lagu yaqaanay inay leeyihiin indho buluug ah ama hal buluug iyo hal il oo bunni ah. Dabeecaddan laguma aqoonsan adduunka bandhigga mana buuxinayso heerka qoran ee jinsiga. Dheguhu waa saddexagal oo horay loo sii wadaa. Dabada ayaa si caadiya loogu xidhay. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Dhaawacyada dambe ee dambe ayaa badanaa la saaraa. Laabta ayaa ballaadhan oo qoto dheer. Koodhku waa gaaban yahay, adag yahay oo qaro weyn yahay. Waa madow iyadoo miridhku ku eg yahay calaamado ku saabsan calaamado ku saabsan dhabannada, afka, cagaha iyo lugaha. Midab casaan leh calaamado bunni ah ayaa sidoo kale jira. Waxaa jira yaraansho ku saabsan hiddo-wadaha timaha oo ka dhigaya midab-casaan fudud.
German Rottweiler iyo American Rottweiler: qaar ayaa sheeganaya inay jiraan kala duwanaansho Rotties, German Rottweiler iyo American Rottweiler. Rotties-ka Jarmalka ayaa la sheegaa inay ka gaaban yihiin, ka keyd badan yihiin isla markaana leeyihiin madax ka weyn, xannibaad badan, halka American Rotties-ka la sheegay inuu ka dheer yahay isla markaana uu ka sharci-darro badan yahay oo aan lahayn madax xannibaad badan. Qaar kale waxay sheegtaan Rottweiler inuu yahay Rottweiler mana jiro wax la yiraahdo Rottie Jarmal ah. Qaar ka mid ah kuwa sheegay doodan ayaa yiri, 'Jarmal Rottweiler waa mid ku dhashay Jarmalka, Rottweiler Mareykankuna wuxuu ku dhashay Mareykanka.' Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira soosaarayaal u tarjumaya muuqaalka Rottweiler-ka Jarmalka oo ka weyn kana xannibaya, halka kuwa kale ay u tarmayaan muuqaalka Rottweiler-ka Mareykanka, oo xayiraad yar.
pug lagu qasay adhijir Jarmal
Rottie waa mid awood badan, deggan, tababaran, geesi ah oo u heellan milkiilaheeda iyo qoyskiisa. Daacad ah oo ilaalinaysa, waxay si adag u difaaci doontaa qoyskeeda haddii loo baahdo, oo umuuqata inay ka badbaado xanuunka. Khatar, xitaa dabeecad leh, geesi ah, kalsooni iyo geesinimo leh, noocani wuxuu u baahan yahay milkiile maskax adag, deggan, laakiin adag oo awood u leh inuu la qabsado eeygan baaxadda weyn. Rottie waa docile, eeyga ilaaliyaha dabiiciga ah oo leh gadaal-gadaal, dabeecad lagu kalsoon yahay. Waa mid aad u caqli badan isla markaana cadeeyay qiimaheeda ka baxsan su aalaha booliska, militariga iyo shaqooyinka caadooyinka qarniyo badan waxaana lagu tababari karaa adeecida tartanka Cabirkiisa awgiis, tababbarku waa inuu bilaabmaa marka eeygu yahay eey yar. Noocani wuxuu ubaahanyahay hogaamin badan iyo is dhexgalka bulshada . Ma noqon doonto mid faraxsan oo ku kooban aqal ama daarad. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Adiga iyo dadka kale oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Markuu Rottweiler-ku helo hoggaan joogto ah oo la tababaro, waxay saaxiib fiican u noqon doontaa carruurta. Waxay aqbali doontaa bisadaha, eeyaha kale iyo xayawaannada kale ee guryaha lagu haysto ilaa iyo inta eygu si wanaagsan u dhexgalay bulshada oo leh milkiileyaal awooddooda ku sheegta eyga. Asxaabta iyo ehelka qoyska sida caadiga ah si xamaasad leh ayaa loo soo dhoweeyaa. Shisheeyaha uu eeygu ka dareemo ujeedooyinka xun kama fogayn karaan laamiga.
Dhererka: Ragga 24 - 27 inji (61 - 69 cm) Dumarka 22 - 25 inji (56 - 63 cm)
Miisaanka: Ragga 95 - 130 rodol (43 - 59 kg) Dumarka 85 - 115 rodol (38 - 52 kg)
Noocani wuxuu u nugul yahay dhaawaca ACL. U nuglaanshaha dysplasia sinta Sidoo kale u nugul gelitaanka (yaraynta dillaaca u dhexeeya baalasha indhaha). Waxay u eg tahay khuuro Si fudud ayaa loo cuni karaa
Rottie wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Eeyahaani waa kuwo aan firfircooneyn gudaha gudaha iyo daarad yar ayaa ku filnaan doonta.
Rottweiler wuxuu ubaahan yahay jimicsi badan. Ma siin kartid eydan adag shaqo badan ama jimicsi ay ku barwaaqoobaan. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta socod ama orod . Ku orodka kaynta iyo dhulka banaan iyaga ayaa farxad galinaya iyaga oo aan doonaynin inay kaa fogaadaan. Dabaasha ama socodka baaskiilku waa waxqabadyo ku habboon eeygan sidoo kale wuxuu jecel yahay soo kabashada kubbadda.
Qashinka waaweyn badanaa waxay yeelan karaan 10 - 12 eeyo
Jaakad jilicsan oo dhalaalaysa way fududahay in la xajiyo. Ku caday burush adag oo maydh oo ku maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
eey xoolo Australia iyo isku dhafka pitbull
Rottweiler ayaa laga yaabaa inuu ka soo jeedo Talyaani Mastiff , kaas oo la socday xoolihii ay Roomaaniyiintu la yimaadeen markay Yurub soo galeen. Intii lagu jiray qarniyadii dhexe, waxaa loo isticmaali jiray sidii xoola-dhaqato, waardiye, eey dhambaal ah, eey qabyo ah iyo shaqada booliska. Waxaa lagu cunay magaalada Jarmalka ee Rottweiler ee Wurttemberg. Ficil ahaan bakhtiyey 1800-yadii, tirada dadka waxay bilaabeen soo noqosho horaantii qarnigii labaatanaad iyadoo ay ugu wacan tahay dadaalka ay ku bixinayaan dhiirrigeliyeyaasha xamaasadeysan ee xaruntoodu tahay Stuttgart. Jarmalka markay ahayd Janaayo 13, 1907, DRK (Deutscher Rottweiler-Klub (Jarmal Rottweiler Club)) ayaa la aasaasay. Waxyar kadib markay ahayd Abriil 27, 1907, waxaa la sameeyay SDRK (Süddeutscher Rottweiler-Klub (South German Rottweiler Club)), oo markii dambe noqotay IRK (International Rottweiler Club). Heerka Rottweiler ayaa markaa la dejiyay. Noocani waxaa markii ugu horaysay aqoonsaday AKC 1931. Qaar ka mid ah hibooyinka Rottweiler-ka waxaa ka mid ah: daba galka, dhaqashada, ilaalinta, ilaalinta, raadinta iyo samatabbixinta, eeyaha hagaha dadka indhoolayaasha ah, shaqada booliska, gaadhiga, gaadhista, adeecida tartanka iyo Schutzhund.
CRC = Naadiga Rottweiler ee Gumeysiga
DRK = Naadiga Jarmalka ee Rottweiler
IRK = Naadiga Caalamiga ee Rottweiler
Ugu badnaan wiilka yar ee Rottweiler ee jira qiyaastii 7 toddobaad jir— 'Kani waa Rottweiler Max. Waxaa halkan lagu muujiyay 48 maalmood jir. Runti waa nin adeecsan laakiin xoogaa madax adag. Wuxuu leeyahay tamar badan sidaa darteed waxaan u qaadaa ugu yaraan 3 socod maalintii. Sawirkaan wuxuu si dulqaad leh iigu fadhiyaa inaan jabiyo daboolida ukuntaas adag ee la kariyey, maxaa yeelay kaligiis kuma sameyn karo lol. Kaliya waan jeclahay isaga.
Bear, lab Rottie ah oo 1 jir ah oo taagan deyrka.
Mila the Rottweiler puppy at 5 bilood jir
Eyk Vom Wendehammer SchHi ZTP, waxaa iska leh sawirka GLI Antichi Molossi Italy
Dumarka Jarmal Rottweiler ee 12 bilood jira
husky qasmay qasbo
'Tani waa ninkeyga yar ee muruqa ah, Chaos. Waa 3 bilood jir duduna yar yahay oo si fiican isu dheellitiran. Wuxuu jecel yahay inuu waqtigiisa ku qaato la ciyaarista eeykeyga kale waana hubaal inuu isaga daalinayo. Muuqaalkiisa yar ee qurxoon ayaa ah inuu gabi ahaanba u jiifo inuu wax cuno. Ka hadal tamarta keydinta :) Isagu waa wax weyn oo ku soo kordhay qoyska mana sugi karo tus xargaha sidaa darteed wuxuu ku kori karaa inuu noqdo u doodaha nooc weyn! '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Rottweiler
Sawirada Rottweiler 1
Rottweiler Sawirada 2
Rottweiler Sawirada 3
Rottweiler Sawirada 4
Mamnuucida Taranka: Fikrad Xun
Nasiib wanaag Labrador Hawl-gabe
Cadaadiska Qaabka Ontario
Muxuu eeykeyga sankiisa sanka uga beddelay madow una noqday casaan?
Liiska Eeyaha Buluuga ah
Eeyaha Rottweiler: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
intee ayey le'eg yihiin jiirku
eey buur madow iyo caddaan
casaanka australia lo'da husky mix
feer pitbull feer isku qasan eeyo
min pin qas chihuahua dabeecad
isku darka chi rat terbaru